Sida loo dib iPhone la Lugood 12
Haddii aad ka mid tahay kuwa milkiilayaasha nasiib darro ah iPhone ah lahaa oo ay la kulmaan badiyay taleefannadooda tahay, isagoo la xado ama si fudud isagoo iibsaday iPhone cusub oo aan xogta jir ah iyo goobaha lagu badbaadinayo ka qalab jir, aad ogtahay sida ay hadda muhimadda ay leedahay a gurmad.
Koobiyo faylasha aad waa hab wax ku ool ah si loo hubiyo in dhammaan xogta aad si sax ah badbaadiyey iyo in dhammaan macluumaadka waxaa laga heli karaa waqti kasta. Habka ugu fiican ee ay sidaa u sameeyaan waa run ahaantii in ay isticmaalaan Lugood 12 in ay dib u kor files iyo goobaha qaar ka iPhone in markii aad rabto ama u baahan tahay in goobaha la mid ah oo ku saabsan mid ka mid ah oo cusub oo aadan u baahan doontaa inaad lumiso dhamaan macluumaadka ku jira ku saabsan qalabka macruufka jir.
About Lugood 12
Lugood 12 waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee dib ilaa xogta iyo goobaha aad iyo tago oo dhan walaac aad ka danbeeya. Waxaa ka sahlan tahay in aan waxba ka: kaliya aad u baahan tahay in lagu xiro qalab si aad u computer iyo ha Lugood shaqeeyaan ay sixir aad u. Haddii kale, waxaa suurtagal ah in la sii wado in howlgal la mid ah sameeyo habka isku gacanta waqti ka waqti. Mulkiilayaasha macruufka 3.0 sidoo kale fursadaha in ay hayaan ay Windows XP, si uu u helo oo dhan oo ka mid ah taariikhda.
Waa maxay macnaha Lugood dib?
Iyadoo Lugood 12 waxaad leedahay fursad ay ku qaban karaan dhamaystiran dhabarka ilaa oo ka mid ah goobaha iyo taariikhda laga heli karaa qalab macruufka. Ka fikir tusaale ahaan ka mid ah oo dhan ee aad sawiro, fariimaha qoraalka ah, qoraalo, Deymaha maqan cod, xiriirada iyo aad u badan in aadan jeclaan lahaa in ay lumiyaan marka gudbaynaa hore iPhone in version cusub.
Qaybta 1. Sida loo gadaal ilaa warbixin ku saabsan Lugood 12 dadka isticmaala Windows
Wondershare TunesGo waa barnaamij aad u fiican in ay oggolaadaan in aad inuu u dhaqaaqo dhammaan faylasha, songs, sawirada iyo warbixin-shaqsiyeedkaaga ka iPhone in aad PC. Tallaabada ugu horreysa ee markaas waa inaad kala soo baxdo aad version maxkamad barnaamijka internetka ee your computer. Marka aad u soo dajiyo, waxaa lagu daahfuri iyo xiriiriyaan iPhone in computer iyada oo aad cable USB. Your iPhone si toos ah ogaan doonaa!
Haddii aad user Windows ah, aan aragno sida loo isticmaalo TunesGo la Lugood.
First of dhan aad iska cad u baahan tahay inaad kala soo bixi TunesGo aad kombuutarka oo lagu xiro qalabka aad si aad u computer dhex cable USB ah. Markaas furo suuqa kala barnaamijka.
Hadda, guji "Si Lugood 'uu furmo suuqa hoose. Howlgalkan waxuu kuu ogolaaneysaa in aad dhoofin aad music, playlists, videos, Podcasts, buugaag, arts, iwm ka qalab aad u Lugood.
Si loo dhoofin aad warbaahinta , waa in aad ka dibna riix on suuqa kala maamulka Warbaahinta. Hadda oo kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan faylasha aad rabto in aad wax dhoofinta iyo ka dibna riix on menu dhoofinta on bar menu ah.
Si loo dhoofiyo Xiriirada guji xiriirada on column ka tagay. Dooro xiriirada aad doonayay oo riix badhanka soo dejinta / dhoofinta. Markaas, dooro tallaabo u dhiganta ka mid ah liiska
Si aad u dhoofiyaan aad sawiro , guji photos on column ka tegey oo la furo album ah. Soco hadda in ay doortaan oo dhan sawirrada aad dooneyso in aad u dhoofiyaan on PC ka dibna riix on xagal ka hooseeya 'dhoofinta in ay' si ay u gudbiyaan sawiro ah in aad damisid.
Sidaas in ay tahay! Mid aad u fudud, miyaanay ahayn?
Sidee in ay dib u kor macluumaad ku saabsan iCloud dadka isticmaala Windows
iCloud bixiyaa hab kale oo sahlan in uu kaydiyo faylasha. First of dhan, diiwaangelinta oo ah adeegidda laga aad si toos ah u qaadan 5GB ee kaydinta free korkiisa, in loo isticmaalo iCloud kaabta, iCloud Drive, iCloud Photo Library, xogta app iyo waraaqaha lagu kaydiyaa iCloud, oo ay ku jiraan iCloud Mail. Waxaa dhab ahaan suurto gal ah in la gaarsiiyo meel aad kaydinta iibsato kaydinta dheeraad ah.
Gurmad waxaa si toos ah u samaysay markii qalab way rogmatay on (labada qufulan ama ku xiran il awoodeed a).
Sidaas waxa aad awooddo si wax ku ool ah oo ku saabsan gurmad iCloud?
La soo iibiyo taariikhda music, filimada, bandhigyada TV, barnaamijyadooda, iyo buugaag.
Photos iyo videos on qalabka macruufka aad.
Home screen iyo ururka app
iMessage, SMS and MMS farriimo
Visual farriinta codka
Halkan waa sida ay tahay in aad sii wado:
First of dhan, download iCloud for Windows. Marka lagu sameeyey, waxaa la furo iyo in la saxiixo warqadaha Aqoonsiga akoonka aad u abuuray aad.
Dooro content in aad rabto in aad ula socodsiisid guud ahaan qalabka aad.
Markaas, guji dalban!
iCloud for Windows abuuraa folder Photos loo yaqaan iCloud Photos ah: wax sawiro cusub oo ah in aad qaadato ku saabsan qalabka macruufka la kadibna si toos ah u kaydiyaa gal heegan ah.
Xusuusnow in aad mails, xiriirada, jadwalka taariikhda, iyo xusuusinta ayaa sidoo kale waxa lagu kaydin karaa oo kor u sii taariikhda ku qalab aad! Sababtan awgeed, waa in aad hubiso in aad qotomisay iCloud Mail on dhammaan qalabka aad samaysaa in aad kombuutarka, u furan iCloud for Windows , dooro Mail, Xiriirada, Kalandarada, iyo Waajibaadka, ka dibna riix codso.
Qaybta 2. Sidee in ay dib u kor macluumaad ku saabsan i Gurtida 12 users Mac
Haddii aad tahay qof user Mac ah waxa kale oo aad fursad u heli doona in ay isticmaalaan Wondershare TunesGo Retro sida aad doorbiday gurmad nidaamka. Halkan waxaa ah sidii aad u samayn:
First of dhan, qalab macruufka ah oo aad ku xidhan in aad Mac iyo abuurtaan TunesGo
Markaas, guji "Si Lugood 'hoose ee suuqa kala ah:
Halkaa marka ay marayso, waxaad heli doontaa suuqa kala pop-up aad ka warrami in qaar ka mid ah heesaha iyo playlists ka maqan maktabadda Lugood ah. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in guji bilowday in ay bilaabaan habka wareejinta.
Sidoo kale, si ay u gudbiyaan aad sawiro ka iPhone in aad Mac, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan Photos ka menu bidix. Markaas, guji camera duudduuban oo ku saabsan xaq u leeyahay inuu u muujiyo sawirada qarsoon ee qaybtan. Hadda dooro sawirrada aad dooneyso in dhoofin oo guji "Dhoofinta '. Hawlgalka ayaa la mid ah ayaa loo heli karaa videos.
Sidee in ay dib u kor macluumaad ku saabsan iCloud u isticmaala Mac
First of dhan, la abuuro xisaabtaada iCloud, daayeen in nidaamka la door dooro icon ah.
Saxiix la aqoonsiga aad
Dooro kuwaas oo aad rabtid in aad awood u kaydinta of waxyaabaha aad.
U fiirso si kastaba ha ahaatee in meel bannaan oo lagu kaydiyo on iCloud waa xadidan tahay. Si loo cusboonaysiiyo, tuubada ku saabsan doorasho Plan Change Kaydinta in la gaarsiiyo in unug kaydinta weyn:
4 Talooyin Goobaha kaabta ee Lugood 12 aad u baahan tahay inaad ogaatid
Sidee si ay u gudbiyaan Non iibsaday Music ka iPod in Lugood
Sida loo Guba Lugood Radio in CD
Sidee si ay u gudbiyaan iPod playlist in Lugood
Sida loo dib iPhone Notes aan Lugood
> Resource > Lugood > Sida loo dib iPhone la Lugood 12